IBhayibhile​—Ngaba Nyhani ‘Iphefumlelwe NguThixo’?
INQAKU ELINGUMXHOLO | NGABA NYHANI IBHAYIBHILE IVELA KUTHIXO?
IBhayibhile—Ngaba Nyhani ‘Iphefumlelwe NguThixo’?
UYAYIKHOLELWA into yokuba iBhayibhile ivela kuThixo? Okanye ucinga ukuba yincwadi nje enezinto ezacingwa ngabantu?
Le yimpikiswano engasoze iphele nakubantu abathi bangamaKristu. Ngokomzekelo, ngo-2014 uhlolisiso lweGallup olwenziwa eMerika lwabonisa ukuba abona bantu baninzi abathi bangamaKristu bayavuma ukuba “iBhayibhile inayo into enokwenza noThixo.” Kweliny’ icala, malunga nomntu omnye kwabahlanu ekwathethwa nabo, uthi iBhayibhile yincwadi njee “yeentsomi namabali akudala futhi inembali nemithetho ebhalwe ngabantu.” Oku kungaboni ngasonye ngeBhayibhile kubangela ukuba abantu babe nomdla kweyona nto ithethwa ligama elithi ‘iphefumlelwe.’—2 Timoti 3:16.
KUTHETHA NTONI UKUTHI ‘IPHEFUMLELWE’?
IBhayibhile ineencwadana eziyi-66. Ababhali bayo abayi-40 bathatha iminyaka emalunga neyi-1 600 ukuyibhala. Kodwa ukuba iBhayibhile ibhalwe ngabantu, kutshiwo njani ke ukuba ‘iphefumlelwe nguThixo’? Eyona nto ithethwayo xa kusithiwa ‘iphefumlelwe nguThixo’ kukuba izinto ezibhaliweyo kuyo zivela kuThixo. IBhayibhile iyibeka kanje le nto: “Abantu bathetha ngokuphuma kuThixo njengoko babeqhutywa ngumoya oyingcwele.” (2 Petros 1:21) Ngamany’ amazwi, uThixo wasebenzisa amandla akhe angabonakaliyo, umoya oyingcwele, ukuze adlulisele umyalezo wakhe kubantu ababebhala iBhayibhile. Le nto singayifanisa nosomashishini ocela unobhala wakhe ukuba ambhalele ileta. Umbhali wale leta asinguye lo uyibhalayo, kodwa ngusomashishini.
Abanye ababhali beBhayibhile bawuva ngengelosi umyalezo kaThixo. Abanye uThixo wababonisa imibono. Ngamanye amaxesha, uThixo wayebaxelela emaphupheni. UThixo wayekhe abavumele ukuba bawubhale ngawabo amazwi, kanti ngamany’ amaxesha wayebaxelela amagama amabawabhale. Ngoko, abantu babengabhali izinto ezicingwe ngabo, babezixelelwa nguThixo izinto amabazibhale.
Yintoni esenza siqiniseke ukuba nguThixo owaphefumlela ababhali beBhayibhile? Khawufunde ngezinto ezintathu ezikula manqaku alandelayo ezisenza siqiniseke ngombhali weBhayibhile.
IBhayibhile Lilo Ngokwenene ILizwi LikaThixo Eliphefumlelweyo
Abantu abaninzi bayayikhanyela into yokuba iBhayibhile ibhalwe nguThixo. Funda ubungqina uze uzigqibele.